माधव नेपाललाई ओलीको आरोपः भूमि आयोग बनेपछि छाती पिटीपिटी रुदै हुनुहुन्छ (भिडियो) – Nepal Press
माधव नेपाललाई ओलीको आरोपः भूमि आयोग बनेपछि छाती पिटीपिटी रुदै हुनुहुन्छ (भिडियो)
२०७७ माघ २२ गते १६:१८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको इतर समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले देशमा भूमिहीनको समस्या समाधानमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगमाथि नेपालले मुद्दा हाल्न लगाएर काम गर्न नदिएको उनको दावी छ । किसान महासंघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘विगतमा उहाँले कृषि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बनको आयोगलाई कामै गर्न दिनुभएन । यसपटक पनि आयोग बनेपछि छाती पिटीपिटी रोइरहनुभएको छ ।’ नेपाललाई कृषि क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव केही नभएको ओलीले टिप्पणी गरे ।
‘उहाँले कहिल्यै हलो समातेको छैन । नजोति खान पाएपछि किन जोत्नुपरो । धान कसरी रोप्छन् थाहा छैन । उहाँले रोपेको छैन । उहाँ किसानका समस्या, कृषि क्षेत्रका समस्या बुझ्नै चाहनुहुन्न । अनि आफ्ना मान्छे परेनन् भनर एकजना वकीललाई मुद्दा हाल्न लगाउनुभो’ ओलीले भने ।
उनले थपे, ‘मैले हिजो साथीहरूलाई एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ । नेपालमा कृषि समस्या समाधानमा वाधा हाल्ने एउटा नेताको नाम बताउनुस् त । उहाँहरूले सही जवाफ दिनुभएको थियो । तपाईंहरुलाई पनि सोध्छु । कोहो वाधक ?’ (सहभागीले एक स्वरमा माधव नेपाल भनेपछि… ) ‘हो, सही आयो । सप्पै एकैचोटि पास हुनुभयो । कति छर्लंग छ कुरो । दुईमतै छैन । कसैको फरक मत छैन । माधव नेपाल हो जसले किसानका समस्या समाधान गर्न आफ्नै मन्त्री दलबहादुर राना, शारदा सुवेदी मेरो होइन भन्नुभयो । मेरो मान्छे होइन, त्यसकारण यो हुँदैन भन्नुभयो ।’
‘यसपटक पनि खुब रोक्न खोज्नुभएको थियो, पर्नुभो फेला पद्मा अर्यालको । मुद्दा हाल्न खोज्नुभएको थियो । तमासा गर्नुभएको थियो । पद्मा अर्याललाई बोलाएर हप्काउन खोज्नुभयो । मेरा मान्छे र तेरा मान्छे भन्ने हो भने को हुन् तपाईंका मान्छे ? देवी ज्ञवाली कसका मान्छे ? मेरो त होइन, जात थर ठाउँ गोत्र केही मिल्दैन ’, ओलीले भने ।
प्रकाशित: २०७७ माघ २२ गते १६:१८